Hacker agbali na Apg29 | Apg29
Hacker agbali na Apg29
Ọ na-e ugboro ugboro hacking mgbalị na Apg29 ka SQL injections.
Ihe kpatara nke mberede hacker ọgụ amaghị m, ma m na-eche ma ọ bụ n'ihi nke a isiokwu: Franklin Graham homophobic ma ọ bụ onye okwuchukwu?
Ụnyaahụ m nwetara ihe email site na m mba ụlọ ọrụ ebe ha mara ọkwa na ọ bụ mere hacker mgbalị na blog saịtị Apg29.nui ụdị SQL injections .
"Anyị chọpụtara na ọrụ na peeji nke apg29.nu eji mgbalị omume SQL injection iji nweta ndutịm ohere na n'akụkụ."
M mechie oge ọrụ dị ka ha na-agbalị na-uru na kpochara nchekwa data nke malware Apg29 meere a.